Pantheon: Ny traikefa fototra | Avy amin'ny Linux
Pantheon: Ny traikefa fototra
elruiz1993 | | Fisehoana / personalization
Salama fiaraha-monina Avy amin'ny Linux, Elruiz1993 manoratra amin'ny lahatsoratra / fampianarana kely. Fantatsika rehetra ny tantaran'ny ekipa fototra, izay natomboka tamin'ny fonosana kisary, avy eo ny lohahevitra, ny mod ny Nautilus ary ankehitriny izy ireo dia iray amin'ireo tetik'asa izay nahatonga ny fanantenana lehibe indrindra amin'ny panorama distros ankehitriny GNU / Linux.
Ity ekipa ity dia niavaka tamin'ny tetikasan'ny fampiharana minimalist, haingana, maivana ary toa tsara (izay lazain'ny maro fa toa MacOSX, vakio ny Fampitandremana 2). Raha miresaka ara-teknika izy ireo dia mampivelatra ny fampiharana azy ireo GTK3, vala y C ++, izay manazava ny fahombiazan'ny fampiharana sy ny tontolo iainana amin'ny ankapobeny.
Ny ekipa fototra izy izao dia mamorona ny kinova faharoa an'ny distro ElementaryOS (tena tany am-boalohany), antsoina Luna ary miorina amin'ny Ubuntu. Ho an'ireo izay te-hizaha toetra ny fandrosoan'i Daniel Foré sy ny ekipany dia afaka mametraka ireto PPA manaraka ireto ho an'ny Ubuntu sy ny derivatives (tsirairay avy):
Fanamarihana: Manoro ny Midori i Elementary, maivana ary mifototra amin'ny WebKit, fa tsy voatery.
Ankehitriny, manavao ireo trano fitahirizana izahay:
Ary apetrakay ny singa Elementary (tsipika tokana):
Fanamarihana 1: Raha mandefa lesoka ianao milaza fa tsy misy intsony ny fonosana sasany dia aza raharahianao izany, manova matetika ny programa misy azy ny Elementary.
Fanamarihana 2: Ho an'ireo mpampiasa / mpankafy Archlinux, hitako ireo fonosana tao AUR saingy tsy fantatro ny fahamatorany, noho izany tiako ny hanandramanao sy hizaranao ny zavatra tsapanao.
Fanamarihana 3: Nilaza ilay mpiara-miasa amin'i Perseus fa nanoratra ny fametrahana azy tao amin'ny diariny tao amin'ny diariny izy, izay hahafaly ahy satria tsy nahita fampahalalana na torolàlana hametrahana azy amin'ny Internet ENTIRE (Tonga tany amin'ny pejy 40 an'ny Google aza aho, izay efa be dia be).
Fanamarihana 4: ny lohahevitra GTK, ny haingon-trano ary ny sary masina dia azo ovaina amin'ny GNOME-Tweak-Tool
Amin'ny faran'ny fametrahana dia olana fotsiny ny fivoahana sy ny fisafidianana ny "Pantheon".
1 Tongasoa eto amin'ny Pantheon
1.1 Slingshot, fomba iray hafa handefasana fampiharana
1.2 Tabataba, mpilalao tsotra nefa mahery
1.3 Switchboard, amin'ny teôria ny tsara indrindra amin'ny rafitra
Tongasoa eto amin'ny Pantheon
Ny birao vaovao dia misy fizarana 3:
Ny bara ambony, izay misy ny fotoana, ny feo, ny tamba-jotra, ny fotoam-pivoriana sy ny mail / chat ary ny takelaka fampiharana, izay hanokatra ny mpandefa Slingshot.
Ny birao, izay azontsika atao ny manova ny Wallpaper amin'ny fomba nentim-paharazana (manana ny fanohanan'ny Firefox izy hanovana azy amin'ny browser).
Ny dock (Plank), ny asany dia ny dock sy ny lisitry ny varavarankely misokatra.
Fanamarihana: Mba hanesorana ireo kisary rehetra, mandehana fotsiny amin'ny /home/.configure/plank/dock1 ary hamafa ny fampiharana tadiavinao (na ny Plank iray aza).
Slingshot, fomba iray hafa handefasana fampiharana
Slingshot no mpandefa rindrambaiko tsy misy fampiasa, manana fomba fijery 2 misy izy hampisehoana ireo singa: Karazan-tsarimihetsika (handamina ny fandaharana rehetra araka ny filaharan'ny abidia) sy ny List Type (handamina azy ireo amin'ny sokajy).
Fanamarihana: Nahamarika bibikely iray mahasosotra aho, izay rehefa manindry ny rindranasa na ny birao / fikandrana miasa dia tsy mikatona izy io, mila tsindrio ny kiheba "Applications".
Tabataba, mpilalao tsotra nefa mahery
Ny mpilalao mozika default dia tsotra ary karazana lakroa eo anelanelan'ny iTunes sy Rhytmbox ary mahomby ary koa mahavariana. Mikaroha amin'ny alàlan'ny fanangonana anay, alamino abidia, arakaraka ny artista, rakikira ary karazana. Manana olana 3 fotsiny izy: tsy manana ekarista, tsy azo ajanona ao ambadika izy ary tsy azo fehezina avy amin'ny Hotkeys. Afa-tsy ireo fanelingelenana ireo (mbola azo ampiharina satria eo am-pandrosoana izy io hatreto) tena tsara izany.
Switchboard, amin'ny teôria ny tsara indrindra amin'ny rafitra
Alao an-tsaina ny fanangonana ao anaty programa tokana ny fikirakirana ny fampiharana QT, GTK, Flash Player, Lalao ary ny hafa. Asongadiko amin'ny teôria satria mbola maintso be izy io ary tsy dia mitovy amin'ny GNOME Control Center, fa mampanantena ilay zavatra.
Mampalahelo fa tsy afaka nanandrana rindrambaiko sasantsasany aho saingy mbola tsara tarehy ihany: anatn'ny (Makà sary sy horonan-tsary amin'ny Webcam) Tsy mbola namerina izany aho satria tsy manana fakantsary. Fanamarihana ambany pejy (Fanamarihana momba ny birao) Tsy ampiasaiko io. Dexter (Fifandraisana) Tsy nahy no nanokafako azy fa miaraka amin'ny lisitry ny namana fiaraha-miory (Raha mbola mifandray ianao).
Mpanome sakafo (RSS) Tsy mampiasa azy aho satria tsy mampiasa RSS. Scratch (Mpanonta lahatsoratra) toa tsara fa amboary ny .bashrc dia nitsoka fotsiny izy (Nikatona io). Farany nanandrana aho Pantheon-Terminal (Terminus) Ary tsara izany, tsy misy mampiavaka azy manokana afa-tsy ny tsy fananana menus.
Nametraka ny tontolo iainana avy amin'ny Lubuntu aho, ary rehefa nanova ny fotoana aho dia toa nahatsiravina izany. Nihevitra aho fa noho ny kinova GTK ka nametraka (sy nesorina) GNOME-Shell aho ary namboarina.
Pantheon dia manana System Login (Pantheon-Greeter) manokana fa tsy tokony hasiako hevitra ny fampiasana azy, satria tsy mahomby izy io indraindray rehefa manova birao (Ex: avy amin'ny XFCE mankany Pantheon).
Ny Sound famantarana dia mamela anao hanokatra sy hanodinkodina mpilalao samihafa, andrana amin'ny Deadbeef (tsy mandeha), Noise (niasa) ary Clementine (niasa).
Tsy haiko raha miasa amin'ny Debian, fa azo inoana fa hahomby.
Ny torolàlana momba ny fametrahana dia avy http://www.blane.me/2012/03/test-drive-elementary-os-luna/. Milatsaka indraindray ny pejy, navotako ny torolàlana momba ny Terminal azo ianteherana foana reliable
Tsy haiko raha azo ovaina ny menus Slingshot, nanandrana azy niaraka tamin'i Alacarte aho ary tsy nandeha izany.
Ny fanontaniana / olana / fandraisana anjara dia azo apetraka amin'ny fanehoan-kevitra. Miteraka herisetra ny herisetra ka andao hiezaka hitondra izany am-pilaminana 🙂
Ny Laptop-ko dia tsy fahagagana fahavalo eran'izao tontolo izao: efa 4 taona izy, karatra sary Intel (iray amin'ireo ratsy), RAM 1GB ary mbola mihazakazaka mora foana, izay GNOME-Shell, Unity (na 2D na 3D) na KDE (vakio ny fampitandremana 2).
Nahazo fidirana QT tena tsara aho noho ny QT-Config (sudo apt-mahazo mametraka libgnomeui-0 qt4-qtconfig)
Amin'ny ankapobeny, mahatsiaro maivana sy haingana dia haingana ny rafitra, tsy nanana olana tamin'ny fampiasana azy aho ary efa nataoko ho birao malalako mandritra ny herinandro, ka maminavina ho avy tsara ho an'ny ekipa Elementary sy ny rafitra misy azy aho.
Farany, avelako hitifitra ny Desktop anao aho:
Lohahevitra & kisary: ​​Elementary
Manaiky an'ity birao ity i Dr. Stein.
PS: Manoro hevitra ny Soul Eater aho fa tsy handiso fanantenana anao 🙂
Fampitandremana 1: Ity no lahatsoratra / torolalana / fahatsapana / fandraisako anjara voalohany amin'ny DesdeLinux, noho izany azafady mamela ny olana rehetra an'ity tanora mafana fo ity.
Fampitandremana 2: Aza fady ny hevitra momba ny olona mahatonga anao hankahala Ubuntu (sy ny derivatives), MacOSX (hatramin'ny nanoratan'izy ireo ny birao amin'ny fakana tahaka) sy ny hevitra mahery fihetsika (na inona na inona OS / Tontolo iainana sary).
Fampitandremana 3: Pantheon dia mbola rindrambaiko fanandramana ary tsy mety amin'ny tontolon'ny famokarana (na dia mbola tsy nanana olana mafy orina aza aho), raha te hametraka ianao dia aza adino ny manavao isan'andro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fisehoana / personalization » Pantheon: Ny traikefa fototra
42 hevitra, avelao ny anao
Raha efa namoaka ilay anime mpihinana fanahy ianao dia vakio ilay manga. Vao mainka ho tian'izy ireo izany. Mikasika ny Noise, mahaliana tokoa fa tsy hita ireo zavatra 3 heveriko rehefa misafidy mpilalao audio, dia tsy maintsy miandry azy ireo hanatsara azy isika ary manandrana
Ny zavatra ratsy momba ny Soul Eater dia isam-bolana (fa toa akaiky ny farany). Momba ny tabataba dia ny hotkeys sy ny background fotsiny no ampiasako, ilay zavatra equalizer nosoratako satria fantatro fa misy olona mampiasa azy.
Lahatsoratra tena tsara, mampiasa os fanabeazana fototra amin'ny Ubuntu aho ary tena mety tsara izany, saingy mbola maitso maitso. Feedler heveriko fa tsy mandeha io, ilaozana ilay tetikasa raha tsy tadidiko tsara. Oh ary tamin'ny fotoana farany nanandramako nametraka ireo fonosana fanabeazana fototra tamin'ny alàlan'ny aur dia tsy afaka natao izany. Fa efa ela be izay.
Tsy nisy mpitaiza "navotana" ary amin'izao fotoana izao dia nihatsara be izy ireo, nitatitra bibikely maromaro aho tokony ho 2 volana lasa izay ary efa namboarina izy ireo.
Ankoatr'izay dia nametraka ny fanohanana ny granite izy ireo, miampy ireo asa vaovao, ny fifanakalozan-kevitra, ny fanavaozana ny fiara ary ankehitriny dia misy fanohanana ny menio mailaka.
Amin'ny farany dia tsara kokoa ny fotoana rehetra, tokony apetrakao na havaozina, jereo ny launchpad!
Jorge Manjarrez dia hoy izy:
Famakafakana tsara ny rafitra, nalaim-panahy hametraka sy hitsapa azy aho. Ny marina dia tiako manokana ny hampijanonako ho derivative (TANDREMO novakiako ny fampitandremana) an'ny Ubuntu ary hanao toy ny nataon'izy ireo tao amin'ny Fuduntu na Chakra. Mpampiasa Arch Linux aho ary manintona ahy hanandrana zavatra mitovy amin'ny KDE Mod, izany hoe, variant an'ny tontolo iainana ho an'ny Arch fa amin'ny ambaratonga voalohany gnome.
Miarahaba dia tsara.
Valiny tamin'i Jorge Manjarrez
Tena tsara izany, na dia misy fihodinan'ny Fedora miaraka amin'ity tontolo ity aza
Giardy dia hoy izy:
Valiny tamin'i Giardy
Hokasito dia hoy izy:
Filazana fotsiny hoe i Feedler dia nanandrana azy aho tokony ho herinandro lasa izay ary tena nandaitra. Tsy haiko na nilaozana ilay tetikasa na tsia, fa mandeha tsara ilay fampiharana. Mety nanao tweak kely izy ireo izay mahatonga ahy hanana olana nefa zavatra hafa izany.
Mamaly an'i Hokasito
Na dia tsy afaka manome anao 10 ho an'ny soratanao aza aho, dia hita fa lahatsoratra voalohany nataonao ^^, arahabaona.
Izaho dia iray amin'ireo manohana an'io mba hanao olon-tiana Gnome-Shell. Mahery vaika sy malefaka ny teknolojia ao aoriany, ary na dia tsy tiako be aza ny fanapahan-kevitry ny Gnome, ny teknolojia ampiasain'izy ireo dia manaloka ahy * ¬ *.
Izaho dia iray amin'ireo nilaza hoe: Arakaraky ny vao mainka tsara kokoa, satria afaka taona vitsivitsy dia ho hitantsika hoe iza amin'ireo olona ireo no ho mendrika; D
Ny iray amin'ireo mpamorona fanabeazana fototra tao anaty tafatafa iray dia nilaza fa ny fizarana sy ny DE isan-karazany dia toy ny fiara, fa ny maodelin'ny fiara irery dia tsy afaka hanome fahafaham-po ny filan'ny tsirairay. Manaiky aho.
Pantheon dia tsy fork an'ny akorandriaka ...
Natombok'izy ireo ny zava-drehetra, fa raha mampiasa tranomboky sy teknolojia efa misy izy ireo handrindrana ny pantheon, dia lojika izany na ny tena soso-kevitra indrindra.
Raha mijery akaiky ianao, ny pantheon dia tsy mampiasa akorandriaka na akorandriaka, dia mampiasa GALA, ambonin'izay dia mampiasa ny herin'ny mimonomonona, ny fikorontananana ary ny hafanam-po hivelarana ny Gala.
Angamba izany no mahatonga ny gala ho toy ny akorandriaka (voalohany) satria mitovy ny teknolojia ivoaran'ny mutter, metacity ary gtk.
Santy dia hoy izy:
Ampidiro ao amin'ny ubuntu 12.04 i Pantheon satria tena liana amin'ny fanandramana azy aho.
Tiako izany fa safidy maro no nanjavona tsotra izao, ny ratsy indrindra dia ny fotoana niverenan'ny firaisankina, ny tsy nanombohako na ny laucher na ny bara ambony.
Esory i Pantheon fa tsy misy valiny, misy afaka manampy ahy ve?
Valiny tamin'i Santy
andramo diovina ny rafitra amin'ny "sudo apt-get autoremove && sudo apt-get autoclean" dia esory ny firaisankina "sudo aptitude purge firaisan-kina" ary avereno "sudo aptitude hametraka firaisan-kina"
azafady, apetraka indray miaraka amin'ny "sudo aptitude mametraka ubuntu-desktop"
Perseooooo, raha nosoratanao ny fomba fametrahana pantheon fanabeazana fototra? Satria efa nanome feedora 17 tamin'ny lxde aho ary tiako ny hametraka azy io hehehehe andrana ny fisaorana ifotony misaotra betsaka anao.
Crisnepita dia hoy izy:
Orale, mbola tsy henoko mihitsy hoe manana rafitra feno izy io, afa-tsy ireo sary masina. Ho hitako izay mitranga 😀
Valiny tamin'i Crisnepita
Toa tsara, fanontaniana iray? Misy mahalala ve rehefa havoaka ny Elementary OS Luna 0.2?
Araka an'i Daniel Foré: "rehefa vonona", miasa amin'ny Ubuntu 12.10 izy ireo ankehitriny, noho izany dia mety amin'ny Oktobra amin'ity taona ity na amin'ny volana aprily amin'ny manaraka
oh! Andriamanitra ô, mampiasa windows vista ve ianao?! ahahahaha nieritreritra aho fa tsy nisy nampiasa azy intsony 😉
elruiz1993 tsy nahitanao ny nanonona an'i GALA, mpitantana ny windows windows voalohany mifototra amin'ny metacity sy mutter. Raha sanatria miteraka traikefa tena tsara amin'ny mpampiasa ny pantheon-desktop sy ny gala dia azonao andramana izany, na dia toa ny zava-drehetra ao Luna aza dia mbola eo am-pivoarana.
Misaotra noho ny famenoana ny lahatsoratra, tsy nanana hevitra aho. Noheveriko fa mbola nampiasain'izy ireo ilay Gnome-Shell, na dia hafahafa foana aza ilay fahitako azy ary ilay iray antsoina hoe cerbere (izay tsy haiko koa izay ataony)
Cerber dia serivisy iray daemon izay natao hisorohana ny fianjerana amin'ny rafitra, miasa izy io rehefa sendra rindrambaiko nianjera avy eo dia apetrak'i cerbere hiverina hiasa izy io, raha ny teôria dia tsy tokony hampiasaina (raha milamina ny fampiharana) fa mahomby amin'ny tontolo iainana izany. milamina kokoa (amin'ny endrika ivelany) satria na ny firaisankina aza dia mivadika indraindray ny fampiharana toa izao dia manampy!
Maitso be izao ny Gala, saingy heveriko fa izany no mampanantena ny ankamaroan'ny fanabeazana fototra, ankoatry ny rindranasa fanabeazana fototra hafa izay tsy resahinao satria mbola ao anatin'ny andrana fanandramana ianao dia ergo (mpitantana andraikitra), manoratra (fampiharana tsotra hanoratra lahatsoratra misy endrika) ary euclide (ide ho an'ny vala sy fanabeazana fototra), ny sasany efa nojereko fa toy ny saika ny zava-drehetra any amin'ny ambaratonga voalohany dia hevitra tsara izy ireo saingy mbola eo am-pivoarana farafaharatsiny amin'izao fotoana izao!
Miarahaba sy miarahaba ny lahatsoratra, io no voalohany novakiako tamin'ny Espaniôla momba ny fanabeazana fototra! 🙂
Wow, toa fantatra kokoa noho ianao amiko ny momba ny fanabeazana fototra, tiako ny mijery ireo fampiharana vaovao ireo ary manavao ny lahatsoratra araka ny hitako.
PS: Misaotra betsaka, tena tsy ampy ny fampahalalana momba ny fanabeazana fototra amin'ny teny espaniola (amin'ny ankapobeny ny hitako dia ny mametraka beatbox na marlin) fa tsy misy zavatra hafa 🙁
Tsy ilaina ny manampy ny marlin ppa satria ny forkeo marlin fanabeazana fototra hamoronana rakitra-pantheon, amin'ity fomba ity fotsiny ny fametrahana ny desktop-desktop dia hametraka ny kinova marlin ho an'ny pantheon.
Ahoana raha mety hitranga izany rehefa manavao isika ary raha mametraka marlin sy birao fanabeazana fototra isika dia hapetrak'ireo rakitra i marlin ary i marlin dia mety hijanona tsy hiasa na hanjary rakitra (nilaza izany satria nitranga tamiko)
Facu dia hoy izy:
Ny famerenana sy ny hevitra dia efa tena tsara, namporisika ahy izy ireo hanandrana!
Ankehitriny, manana fisalasalana roa aho satria mpampiasa ubuntu fototra ary na dia manandrana mianatra mianatra amin'ny fikaroham-bahaolana amin'ny olana isan'andro amin'ny Internet aza aho dia mbola tsy afaka mamaha zavatra maro samirery. Ny fisalasalako dia:
Ahoana no fomba hitondranao rakitra .sh?
Tsy afaka nanao izany aho: S
Nametraka nautilus sy gnome-terminal mihitsy aza aho mba hahitana raha mandeha izy io, nefa milaza amiko fa misy lesoka ary tsy manana alalana izy .. rehefa manova ny toetra aho amin'ny nautilus, miaraka amin'ny baiko chmod + x ary miaraka amin'ireo rakitra tenany ...
na ny mihazakazaka avy any amin'ny terminal aza manana olana ...
koa, tsy haiko ny antony, fa misy programa maromaro izay tsy miseho ao amin'ny menio antsamotady, manana hevitra ve ianao?
Mamaly an'i Facu
Fega dia hoy izy:
Mba hanatanterahana rakitra miaraka amin'ny extension .sh dia ataonao avy amin'ny terminal (na farafaharatsiny ataoko izany) amin'ny alàlan'ny fametrahana ny tenanao miaraka amin'ny baiko "cd" ao amin'ny lahatahiry misy ny rakitra .sh, ohatra:
Fampidinana cd (raha manana izany ao amin'ny fampirimana fampidinana ianao) dia vantany vao manatanteraka
Raha mila alalana superuser ny rakitra dia alohanareo amin'ny teny hoe "sudo" izany
Manantena aho fa afaka manampy anao io.
Valiny tamin'i Fega
Vao nametraka azy io aho tamin'ny iso souforforge, mba tsy hananana "vices" avy amin'ny tontolo hafa, ary io no zavatra haingana indrindra nanandramako. Ny rindranasa dia marina fa somary maintso izy ireo, saingy mametraka fanavaozana isan'andro aho ary amin'izao fotoana izao dia tsy nahantona ahy izany. Madio, haingana ary ny tsara indrindra hitako izy io, tsy maintsy omentsika fotoana ny osita fanabeazana fototra. Etsy andanin'izany, mba hanampiana fampiharana amin'ny antsamotady dia homeko anao izay hitako tamin'ny internet mba hanaovana azy amin'ny alacarte.
Eto: 1. Mametraha alacarte
2. Sudo ny tonian-dahatsoratry ny lahatsoratrao ary ovao /usr/share/alacarte/Alacarte/MenuEditor.py amin'ny fanoloana ny «applications.menu» rehetra amin'ny «pantheon-applications.menu»
3. Mandrosoa alacarte ary amboary ny fangatahanao avy eo Solution is from: https://bugs.launchpad.net/slingshot/+bug/916727
Azon'ny saina izany?
Lahatsoratra iray tena tsara amin'ity derivative an'ny Ubuntu ity ary mampiseho amintsika ny famoronana sy ny famoronana. Hatramin'ny nahitako voalohany an'ity sub distro ity dia tiako be ny interface madio, ny fahatsorana ary ny fahatsorana nesorina tamin'ny farany ambony.
Heveriko fa ity ekipa ity dia tokony handray ny dingana farany hanaraka ny ohatra an'ny Fuduntu satria manana ny hery sy ny angovo rehetra hahatratrarana zavatra tena tsara sy mahaliana izy ireo nefa tsy voatery hifamatotra amin'ny tetikasan'olona.
Nasehon'izy ireo taminay koa fa ny fironana ankehitriny izay harahina, farafaharatsiny ao anatin'ny fe-potoana antonony, dia ny fahatsorana ary karazana "fenitra" amin'ny resaka interface, toa ny Gnome, Android ho an'ny PC ary ny tetik'asa (raha afaka miantso toy izao ianao) BE.
Manantena aho fa hivoaka tsy ho ela ny kinova vaovao (ilay efa milamina ankehitriny dia tsy misy intsony rehefa navoaka satria miorina amin'ny Ubuntu 10.10 ary noho izany dia tsy misy mpanohana na fanavaozana) ary andramo izany.
Ekipa Elementary tena tsara sy mandroso.
Dario dia hoy izy:
Efa nanandrana aho fa tsy naharesy lahatra ahy. Angamba satria tsy haiko ny mametraka azy tsara.
Ny tiana holazaina dia hoe te hamafa azy tanteraka aho. Ahoana no hataoko?
Valiny tamin'i Dario
Tsotra, esory fotsiny ireo fonosana napetrakao ihany (ny tiako holazaina, sudo apt-get esory SD-standard SD-desktop adium-theme-postler dexter-contact feedler footnote gaffel snap libgranite-demo marlin-plugin-dropbox marlin-plugin-ubuntuone switchboard - gnome-control-center plank-plug wallpaper-plug zramswap-enabler).
Avy eo sudo apt-get clean && sudo apt-get autoremove (hanala ireo fonosana kamboty ary avelao ho toy ny mbola tsy nampiasanao azy)
Miarahaba sy misaotra anao namaky.
Miarahaba anao aho elruiz1993, tsara ny lahatsoratra fa tsy ho an'ny atin'ny lahatsoratra akory, fa noho ny fananana ny baolina "ANARANA" ny mpamaky; ny fomba famakinao; iza no tokony hiteny; ary tsy mila lazainao izany. Manana baolina betsaka noho ny matihanina amin'ny asa fanaovan-gazety maro ianao, fantatro izay tao anatin'ny telo ambin'ny folo taona mahery izay tsy mbola sahy naneho ny hevitr'ilay mpiresaka. Ity dia tsy lahatsoratra momba ny fametrahana azy.
Ka heveriko fa izaho, amin'ny maha-mpampiasa iMac ahy ary liana amin'ny tontolon'ny Linux, manandrana ity rafitra ity, tsy afaka mieritreritra ve fa tsy kopian'ny fanary Mac OS izy io?
Misy manaisotra ahy amin'ny fisalasalako, ny herisetra tsy tapaka ary ny fanararaotana am-bava, tsy tapaka ve ireo mpankafy Linux? sa lamaody?
Salama Francisco, tsy hoe tiako holazaina amin'ny olona izay holazaina, fa kosa ny tokony hataon'izy ireo amin'ny fomba fahalalam-pomba (fantatrao ny isan'ny fanatisme troll sy mahery fihetsika mahery vaika any amin'ny tany Linux). Noheveriko foana fa manan-jo hilaza izay tiany ny olona raha mbola manao izany am-panajana izy ireo.
Miaraka amin'ny tolo-kevitro tiako hialana amin'ny "With KDE dia afaka manao toy izany koa aho raha tsy manelingelina ny voloko" na "Satria tsy afaka mamorona na inona na inona izy ireo dia mila maka tahaka ny Mac", izay tsy manamarina na inona na inona ary ny hany ataon'izy ireo dia ny fanapotehana Linux mpampiasa ary iray amin'ny fiaraha-miasa.
Miarahaba sy misaotra anao namaky ny lahatsoratra.
Salama, manana fanontaniana amin'ireto aho: Te hamafa mpandefa iray izay nataoko tao Slingshot ary tsy hitako io lalana io araka ny anarany: /home/.configure/plank/dock1. Misy fomba ve hanesorana azy? programa vitsivitsy hitantanana azy ireo, tsy hitako ny lalana manodidina. Miala tsiny fa vaovao amin'ny linux aho!
Salama Matias, voalohany indrindra tongasoa eto amin'ny tontolo mampalahelo an'ny GNU / Linux. Ao amin'ny tsipika asehonao dia ny mamafa ny kisary Plank (dock), hanovana ny Slingshot dia havaoziko ny fampianarana
Lahatsoratra tena tsara, andrana aho izao
Toa rafitra tsara dia tsara izany amiko ... io no nandrasako hatry ny ela tao anaty rafitra fandidiana ... na ny ubuntu aza tsy mety afa-po ... nefa indrisy manome ahy fifandonana lehibe eo amin'ny AMD VGA ahy manokana mpamily ary satria mbola mpamily ny mpamily maimaimpoana dia voatery miverina any Ubuntu isaky ny mandeha aho, manantena mafy aho fa hiova izany amin'ny kinova farany ... satria rafitra mendrika hampiasaina ... arahaba ... lahatsoratra tena tsara.
Afaka misy manazava amiko ve raha Pantheon na tsia Shell for Gnome?
Eny, izany dia Shell izay natsangana tamin'ny GTK3.4 (zavatra toy ny XFCE ho an'ny GTK2)
desingblacksystem dia hoy izy:
Io namana io, nametraka fanabeazana fototra fotsiny aho, ny anton'ny hafatro dia ny manontany anao raha azo atao amin'ny SD ny mamerina ny banga tsy mangarahara amin'ny lohahevitra fototra tany am-boalohany, arahaba sy fisaorana
Valiny amin'ny desingblacksystem
LuisMR dia hoy izy:
Manana Ubuntu 14.04 LTS napetraka aho, ary avy eo nametraka pantheon hizaha toetra azy saingy tsy mandeha amiko ny hitsin-dàlan'ny keyboard, dia mitovy amin'ny tratran'ny gnome ... misy mahalala ve ny antony na raha azo amboarina?
Mamaly an'i LuisMR
Raha manana Equalizer ny Noise dia tadiavo namana tsara izany.exelente ny hafatrao, distro be.
GeoGebra, matematika mihetsika
Skype 4.0 ho an'ny Linux vaovao avy ao anaty lafaoro